အွန်လိုင်းပေါ်မှာ Cyber Crime တခုခုဖြစ်လာခဲ့ရင် ဘာလုပ်ရမလဲ? | Online Service Center Myanmar -->
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ Cyber Crime တခုခုဖြစ်လာခဲ့ရင် ဘာလုပ်ရမလဲ?
အမြဲတမ်းသတိပေးဖြစ်တာက #Onlineပေါ်မှာဘယ်သူ့ကိုမှမယုံပါနဲ့ ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပါ၊ ဒီလို Cyber Police တို့ Cyber Crime နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်ဆိုတဲ့ Page တွေ၊ Account တွေက 99.99% #ဂျင်းတွေ ပါ။
ဘာလို့ အတိအကျ #ဂျင်းတွေ လို့ပြောနိုင်ရတာလည်းဆိုတော့ Cyber Crime နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုအချို့အတွက် အများပြောပြောနေတဲ့ Cyber Police, Cyber Crime အဖွဲ့၊ ဆိုတာတွေနဲ့ ပတ်သက်၊ လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးလို့ပါ။
တော်တော်များများက Cyber Crime တခုခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ Cyber Police ကို တိုင်လို့ရတယ်၊ Cyber Crime အဖွဲ့ကို တိုက်ရိုက်အကူအညီတောင်းလို့ရတယ်လို့ တလွဲ ထင်နေ၊ မြင်နေ၊ သိနေကြတာပါ။
တကယ်တော့ အများအခေါ် Cyber Police, Cyber Crime အဖွဲ့ ဆိုတာက အပြင်မှာ #နည်းပညာမှုခင်းဌာန လို့ခေါ်ပါတယ်၊ ဆိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုတခုခုဖြစ်တဲ့အခါမှာ သူတို့ကို တိုက်ရိုက် အကူအညီတောင်းခံလို့မရပါဘူး၊ သူတို့ကို သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေစခန်းကနေ ဆိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုတခုခုဖြစ်လို့ အမှုမှာပါဝင်ကူညီပေးဖို့ အကူအညီတောင်းခံမှသာ သူတို့အနေနဲ့ ဝင်ပါပေးလို့ရပါတယ်။
သူတို့ကို သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေစခန်းကနေအကူအညီတောင်းခံမှသာဝင်ပါပေးပြီး အမှုမှာပါဝင်တဲ့ သက်သေခံပစ္စည်းတွေကို နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စစ်ဆေးဖော်ထုတ်မှုတွေပြုလုပ်ပေးပြီး၊ သူတို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကို တရားရုံးမှာ သက်သေအဖြစ် လိုက်လံထွက်ဆိုပေးတာမျိူးပဲလုပ်ပေးပါတယ်။ အမှုကိုလက်ခံတာ၊ တရားခံဖမ်းပေးတာမျိုးတွေ မလုပ်ပေးပါ၊ အဲ့ဒါမျိုးတွေကို သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေစခန်းကပဲ လုပ်ပေးရပါတယ်။
Online ပေါ်မှာကြုံတွေ့လာရတဲ့ အမျိုးမျိုးသော ဆိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေအကြောင်းအရသွားချင်တယ်၊ လုပ်ချင်တယ်၊ တိုင်ချင်တောချင်တယ် ဆိုရင် #ရနိုင်သမျှသက်သေတွေစုပါ ဒီဘက်ခေတ်မှာ Digital သက်သေအနေနဲ့ အများကြီးတင်သွင်းလို့ရလို့ ရသမျှ #သက်သေ တွေကိုစုပါ၊ ပြီးလျှင် ကိုယ်နေထိုင်ရာအနီးမှ #သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ပါ အမှုပွင့်သွားပြီး အမှုနံပါတ် ( ပ - ဘယ်လောက် ဆိုပြီး ) ထွက်လာပြီဆိုရင် Cyber Crime ( နည်းပညာမှုခင်းဌာန ) နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် Online ပေါ်မှာ Cyber Police ရှိတယ်၊ Cyber Crime အဖွဲ့ရှိတယ်၊ အကူအညီတွေတောင်းလို့ရတယ်ထင်နေတဲ့သူတွေ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အဲ့လိုကူညီပေးတာမျိုးတွေမရှိဘူး၊ လက်ရှိဟာတွေအကုန်လုံးကလည်း #ဂျင်းတွေ ဆိုတာ သိသွားလောက်ကြပြီပဲထင်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တခုခုဆို ပူထူပြီး တွေ့ရာမြင်ရာတွေကို လျှောက်အကူအညီတောင်းခံတာမျိုးတွေမလုပ်ကြပါနဲ့၊ လူလိမ်တွေက လိမ်နည်းပေါင်းစုံနဲ့လိမ်ညာနေကြလို့ ကိုယ်ပဲ တပူပေါ် နောက်တပူဆင့်တာပဲဖြစ်ကုန်ပါမယ်။
အခု Page နဲ့ ဖမ်းမိတဲ့တရားခံဆိုရင် အကောင့်တွေကိုထိုင်ခိုးပြီး၊ ခြိမ်းခြောက်၊ ငွေညှစ်ပြီး လုပ်စားနေတဲ့ အကောင့်သူခိုးတွေထဲကတယောက်ပါ၊ ဒီလို Page တွေနဲ့ အဲ့ဒီလို အောက်တန်းစားအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နေသူတွေကို အကူညီသွားတောင်းတဲ့အခါမှာ အရင်ဆုံး ကိုယ့် info တွေပေါက်ကြားပါတယ်၊ ဒုတိယ ငွေကြေးတွေအလိမ်အညာခံရပါမယ်၊ တတိယ ကိုယ့် info တွေကိုရထားလို့ တနေ့မဟုတ်တနေ့ အဲ့ဒီ info တွေနဲ့ ခြိမ်းခြောက်အကြပ်ကိုင်တာမျိုးတွေ၊ ငွေညှစ်လာတာမျိုးတွေ၊ ထပ်မံပြီးကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီ Post ကို ဖတ်မိဖူးထားရင်၊ ကိုယ့်မှာ အွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှုအခင်းဖြစ်ခဲ့ရင်၊ ရသမျှသက်သေစုပြီး နီးစပ်ရာရဲစခန်းမှာပဲ အမှုဖွင့်တိုင်ကြားပါ၊ အွန်လိုင်းပေါ်က ဂျင်းတွေကိုလိုက် အကူအညီမတောင်းပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းပေါ်က Cyber Crime မျိုးစုံနဲ့အတူ၊ အလိမ်အညာတွေကြားကနေ ရှောင်လွှားနိုင်သူတွေဖြစ်ကြပါစေ။
Aung Kyaw Soe ( 29.8.2020 - 5:32 PM )
Cyber Crime Knowledge Sharing